मौसम विभागको बुलेटिन: कस्तो हुन्छ तीन दिनको मौसम ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
मौसम विभागको बुलेटिन: कस्तो हुन्छ तीन दिनको मौसम ?
२६ भदौ, काठमाडौं । मनसुनी न्यूनचापीय रेखा हाल औसत स्थानको आसपासमा रहेकोले बदलीसँगै वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । न्यूनचापीय रेखा उत्तरतिर सर्नै क्रम शुरु भएकाले अझै केही दिन मौसमी गतिविधि बढ्ने सम्भावना रहेको मौसमविद् राजु प्रधानाङ्गले बताए । न्यूनचापीय रेखासँगै बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवास्पयुक्त हावाको प्रभावका कारण मनसुन सक्रिय भएको मौसमविद्को भनाइ रहेको छ ।
आगामी दिन देशको धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ । ‘वर्षा निरन्तर नभइ केही समय घाम लाग्ने र केही समय वर्षा हुने क्रम चलिरहने छ ।’ मौसमविद् प्रधानाङ्गले भने ।
Previousपूर्वाधार सम्मेलन: ‘नेपालमा लगानी गर्ने मौका नगुमाउनुहोस्’
Nextमध्यरातमा छाेडियाे विप्लवका छोरासहित १५ जना विद्यार्थी